Vaovao - Fanaparitahana ny fampifanarahana
NAHOANA NO MILA NY "CAMERA CAMERA"
Fantatsika rehetra fa mandritra ny sidina, ny drone dia hanome signal-trigger an'ireo lens 5 an'ny fakantsary mihetsika. Ireo lantiro dimy dia tokony haseho amin'ny teôlôjia amin'ny fampifangaroana tanteraka, ary avy eo dia mirakitra fampahalalana POS iray miaraka. Saingy tamin'ny fizotran'ny fandidiana tena izy, hitanay fa taorian'ny nandefasan'ny drone famantarana famantarana dia tsy afaka naseho niaraka tamin'ireto lantana dimy ireto. Fa maninona no nitranga izany?
Aorian'ny sidina dia ho hitantsika fa ny fahaiza-manaon'ireo sary nangonin'ireo solomaso hafa dia samy hafa tamin'ny ankapobeny. Izany dia satria rehefa mampiasa ilay algorithm famatrarana iray ihany, ny fahasarotan'ny fiasa amin'ny tany dia misy fiantraikany amin'ny haben'ny data, ary hisy fiantraikany amin'ny fampifanarahana ny fakan-tsary.
Fomba fiasa samihafa
Arakaraky ny maha-sarotra ny endrik'ireo fiasa no mahabe ny habetsaky ny angon-drakitra mila hamahana, hametahana ary hanoratany ny fakan-tsary. Arakaraka ny maha-ela ny fotoana anaovana ireo dingana ireo. Raha toa ka tonga amin'ny teboka tena ilaina ny ora fitahirizana, dia tsy afaka mamaly ny mari-pamantarana fikatonan'ny fotoana fakan-tsary ny fakantsary ary mihena ny fihetsika fampisehoana.
Raha ny fotoana elanelam-potoana eo anelanelan'ny fampirantiana roa dia fohy kokoa noho ny fotoana takiana amin'ny fakantsary hamenoana ny tsingerin'ny sary, dia halaina sary nalaina ilay fakan-tsary satria tsy afaka mameno ny fipoahana ara-potoana. Noho izany, mandritra ny fandidiana, ny teknolojia fanaraha-maso fakan-tsary dia tokony hampiasaina hampivondronana ny hetsika-fakan'ny fakantsary.
R&D an'ny teknolojia fanaraha-maso fampifanarahana
Talohan'izay dia hitantsika fa aorian'ny AT ao amin'ny rindrambaiko, ny hadisoana amin'ny toeran'ny lopy dimy amin'ny rivotra indraindray dia mety ho lehibe tokoa, ary ny elanelana misy eo amin'ny fakantsary dia mety hahatratra 60 ~ 100cm!
Na izany aza, rehefa nisedra ny tany izahay, dia hitanay fa mbola ambony ihany ny fampifanarahana ny fakan-tsary, ary tena ara-potoana ny valiny. Very hevitra ny mpiasan'ny R&D, maninona no diso be ny fihetsika sy ny toeran'ny vahaolana AT?
Raha te hahalala ny antony, tamin'ny fiandohan'ny fivoaran'ny DG4pros, dia nanampy mpandika fotoana fijerena fakantsary ho an'ny fakantsary DG4pros izahay mba handraketana ny tsy fitovizan'ny fotoana misy eo amin'ny famantarana ny drone trigger sy ny fakan'ny fakan-tsary. Ary notsapaina tamin'ireto scenario efatra ireto.
Sehatra A: Loko sy firafitra mitovy
Sehatra C: loko mitovy, endrika hafa
Sehatra D: loko sy firafitra samihafa
Latabatra momba ny valin'ny fitsapana
Ho an'ireo seho misy loko manankarena, hitombo ny fotoana takiana amin'ny fakantsary hanaovana fikajiana Bayer sy fanoratana-in; raha ho an'ny seho misy tsipika maro dia be loatra ny fampahalalana avo lenta matetika, ary hitombo ihany koa ny fotoana takiana amin'ny fakantsary.
Azo jerena fa raha ambany ny refin'ny fakantsary fakan-tsary ary tsotra ny endriny, dia tsara ara-potoana ny valin'ny fakantsary; fa rehefa avo ny refin'ny fakantsary fakan-tsary ary manahirana ny firafitra, hitombo be ny fotoana tsy fitovian'ny fakantsary. Ary rehefa mihabe ny fahita matetika amin'ny fakana sary, dia ho diso ny fakana sary ny fakantsary.
Fitsipika fanaraha-maso fakan-tsary
Ho valin'ireo olana etsy ambony ireo, Rainpoo dia nanampy rafitra fanaraha-maso ny fakantsary ho an'ny fakan-tsary mba hanatsarana ny fampifanarahana ireo lantiro dimy.
Ny rafitra dia afaka refesina ny elanelam-potoana "T" eo anelanelan'ny drone dia mandefa ny fikajiana famantarana sy ny fotoana fisehoan'ny solomaso tsirairay. Raha ny elanelam-potoana "T" an'ireo lantana dimy dia ao anatin'ny elanelam-potoana azo avela, heverinay fa miara-miasa ireo lantiro dimy ireo. Raha misy sanda fanehoan-kevitr'ireo masolavitra dimy lehibe kokoa noho ny sanda ara-dalàna, dia hamaritra ny vondrona fanaraha-maso fa manana fahasamihafana lehibe amin'ny fotoana fohy ny fakantsary, ary amin'ny fivoahana manaraka dia homena onitra araka ny maha samy hafa azy ilay solomaso ary farany Ireo lantana dimy dia hiparitaka miaraka ary ny elanelam-potoana dia ao anatin'ny faritra mahazatra hatrany.
Fampiharana ny fanaraha-maso ny fampifangaroana ao amin'ny PPK
Aorian'ny fifehezana ny fampifanarahana ny fakan-tsary, amin'ny tetikasa fanadihadiana sy fanaovana sarintany, PPK dia azo ampiasaina hampihenana ny isan'ny teboka fanaraha-maso. Amin'izao fotoana izao dia misy fomba fifandraisana telo ho an'ny fakan-tsary madiodio sy PPK:
1 Ny iray amin'ireo lenta dimy dia mifandray amin'ny PPK
2 Ireo lente rehetra dia mifandray amin'ny PPK
3 Mampiasà teknolojia fanaraha-maso fakan-tsary mba hamerenana ny sanda antonony amin'ny PPK
Ny tsirairay amin'ireo safidy telo dia misy tombony sy fatiantoka:
1 Tsotra ny tombony, ny lesoka dia tsy ny PPK ihany no maneho ny toerana misy ny mason-tokana. Raha tsy ampifanarahina ireo lantom-peo dimy, dia hiteraka halehiben'ny hadisoana hafainganina izany.
2 Ny tombony dia tsotra ihany koa, ny fametrahana azy dia marina, ny fatiantoka dia ny mikendry ireo môdely tsy mitovy ihany
3 Ny tombony dia ny fametrahana marina, ny fahaiza-manao avo lenta ary ny fanohanana ireo karazana modely samihafa. Ny fatiantoka dia ny fanaraha-maso sarotra kokoa ary ny vidiny dia somary avo kokoa.
Misy drone amin'izao fotoana izao mampiasa tabilao 100HZ RTK / PPK. Ny tabilao dia misy fakantsary Ortho hahatratra 1: 500 map-topografika tsy misy fifehezana topografika, saingy ity teknolojia ity dia tsy afaka hahatratra-control-point-maimaimpoana tanteraka ho an'ny fakana sary miavaka. Satria ny lesoka fampandrenesana an'ireo masolavitra dimy dia lehibe kokoa noho ny maha-marina ny toeran'ny fahasamihafana, koa raha tsy misy fakan-tsary mihetsika mitovy-haitao dia tsy misy dikany ny fahasamihafana avo lenta ……
Amin'izao fotoana izao, ity fomba fanaraha-maso ity dia fifehezana passive, ary ny fanonerana dia tsy vita aorian'ny fahadisoana fakantsary fakantsary izay lehibe kokoa noho ny tokonam-baravarana lojika. Noho izany, ho an'ireo seho misy fiovana lehibe amin'ny endriny, dia tsy maintsy hisy ny lesoka isa lehibe kokoa noho ny tokonam-baravarana ,. Ao amin'ny taranaka manaraka amin'ny vokatra Rie series, Rainpoo dia namorona fomba fifehezana vaovao. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanaraha-maso ankehitriny, ny fahamendrehan'ny fakantsary fakan-tsary dia azo hatsaraina amin'ny farafaharatsiny farafahakeliny sy hahatratra ny haavon'ny ns!
Previous:Ny fiantraikan'ny karazana drôna GSD sy ny fiaramanidina ny fahamarinan'ny maodely 3D
Manaraka:Andalana R&D an'ny andiana vokatra Rainpoo